Waa kee waddanka heysta keydka ugu badan ee dahabka adduunka? | Radio Hormuud
Dahabka oo ah hanti ma guurto ah oo aad looga qiimeeyo caalamka ayaa loo aqoonyahan yahay inuu wax badan taro xilliyada ay jiraan xasaradaha dhaqaale.
Bangiyada caalamka ayaa sanadkii lasoo dhaafay keydkooda dahabka ku kordhiyay 650 tan oo kale, sida uu shaaciyay wargeyska arrimaha dahabka ka faallooda ee lagu magacaabo Schiffgold.
In kastoo dahabka qiimihiisa uu hoos u dhacay sannadihii 1970-meeyadii, haddana wali wuxuu ka mid yahay kheyraadka dabiiciga ah ee sida weyn loogu xisaabtamo.
Hadda oo cudurka safmarka ah ee Covid-19 uu saameyn ba'an ku yeeshay dhaqaalaha adduunka, waddan kasta wuxuu milicsanayaa keydka dahabka ee uu heysto.
Xitaa ka hor inta uusan fayraska dillaacin, waxaa hoos u dhac wajahayay dhaqaalaha dunida, dalal badanna waxay diiradda saarayeen inay dahabkooda sii badiyaan.
Kalabarkii ugu horreeyay ee sanadkan 2020-ka, waxaa 16% doolar sare u kacay iimaha dahabka, heerkaasoo ah mid aan la arkin tan iyo sanadkii 2012-kii, sida aan kasoo xigannay bogga lagu keydiyo xogta dahabka ee GoldHub.